Ukuphucula ngokukhawuleza ii-Calculator zemivuzo kuyabulala ukuHlawula ngokufihlakeleyo - Ezintsha
Eyona Ezintsha Ukubala ngokukhawuleza kwemivuzo kwi-Calculatory kuyabulala ukuHlawula ngokufihlakeleyo-kwaye kungakunceda ufumane ukunyuka!
Ukubala ngokukhawuleza kwemivuzo kwi-Calculatory kuyabulala ukuHlawula ngokufihlakeleyo-kwaye kungakunceda ufumane ukunyuka!
Amagagasi eenkampani zobuchwephesha bazisa izixhobo zokuchitha inkcubeko yemfihlo yokuhlawula ikhulu leminyaka.Unsplash
Imali ayisiyonto ilula yokuthetha ngayo kwiinkampani zaseMelika. Nokuba bacinezelwe yimigaqo-nkqubo ebhaliweyo okanye imigaqo engaziwayo, uninzi lwabantu luyayiphepha ingxoxo ngemivuzo nabantu abasebenza nabo.
Abaphengululi abanomdla Khuphela imvelaphi yokufihla umvuzo emva kwasekuqaleni kweminyaka yoo-1900. Ngaphandle kokungabikho kophando olufanelekileyo olulinganisa nzulu izibonelelo zalo xa kuthelekiswa neendleko, ukugcinwa kwemfihlo kuhlala kuyinto eqhelekileyo kwinkampani ezininzi kwiindawo zaseNtshona.
Imvumelwano sele yenzekile, kubonakala ngathi, phakathi kwabaqeshi abagcina amanani emivuzo ebumnyameni igcina abo bakhuphisana nabo bekude nale nkcukacha zibuthathaka kwaye inceda ukuphepha naziphi na iimvakalelo ezinzima phakathi kwabasebenzi babo ngenxa yokukhuphisana nabanye ngaphambili.
Ukuguqukela kwimithombo engaphandle
Eyona ndlela ilula yokufumanisa ukuba uhlawulwa malini xa kuthelekiswa neontanga yakho ibisoloko iguqukela kwimithombo yangaphandle efana neendawo zomsebenzi okanye iifemu zokubonisana ne-HR, utshilo uMichael Wesson, unjingalwazi kulawulo kwiYunivesithi yaseTexas A&M.
Kubantu abaninzi, oovimba bokuqala abaza engqondweni yiGlassdoor okanye ezinye iziza zomsebenzi ezifanayo ezibonelela ngomqikelelo womvuzo. Nangona kunjalo, kubantu abafuna umsebenzi ngamandla kunye nabantu abafuna ukunyuselwa, uqikelelo olunikezwe yiGlassdoor aluhlali lwanele. Ezona zikhalazo zixhaphake kakhulu kukuba amanqanaba emivuzo kwizikhundla ezithile makhulu kakhulu ukuba anganentsingiselo kwaye amanye amanani achanekile.
Ulwazi ngemivuzo kwiGlassdoor isekwe ikakhulu kwizimvo zokuzithandela ezivela kubasebenzisi bayo. Njengomgaqo jikelele, ulwazi oluninzi lomvuzo olufumanekayo kuyo nayiphi na indima, inokuthenjwa ngakumbi idatha yomvuzoIglasi yangaphandleImiboniso yendima eza kuba yiyo, utshilo isithethi senkampani.
Umzekelo,umvuzo ophakathi weGoogleisoftwareinjineli kwiGlassdoor$ 127,000, esekwe ngaphezulu kwama-5,600 iingxelo zemivuzo ezingeniswe ngabasebenzi bakaGoogle ngesi sihloko somsebenzi.
Obu bubungakanani besampulu enkulu, ucebisa ukuba idatha ithembekile, utshilo isithethi.
Kodwa idatha efunyenwe kwinkqubo elula yokungenisa umsebenzisi inokulahlekisa.
Yile nto ndiyifundisayo kwiklasi yam yembuyekezo: ukuba ulwazi lomvuzo olifumana kwi-intanethi ligalelo labasebenzisi, umndilili uthambekele ekubeni ngaphezulu komvuzo ophakathi, utshilo uWesson.
Kwelinye icala, amanani avareji omvuzo akhutshwe ziarhente zikarhulumente ahlala ephuma ngaphantsi komndilili weyona mveliso, ngenxa yokuba icandelo labucala lihlala likulungele ukuhlawula ngaphezulu kweearhente zikarhulumente ngomsebenzi ofanayo, utshilo.
Kuba xa umntu ebuza ukuba yimalini oyenzayo, unesikhuthazo sokugqitha kwinani ukuze libonakale ngathi unomvuzo ongaphezulu komndilili, ucacisile uWesson.
Ngaphezulu koko, uninzi lophando olwenziwe ziisayithi zemisebenzi alungeni kwi-nitty-gritty yembuyekezo, enokuthi ibandakanye ukuhlawulwa kwesiseko, ibhonasi, igalelo lomhlala-phantsi, ulungiselelo lobulungisa njalo njalo. Amanani abasebenzisi abawangenisayo anokuba yiyo nayiphi na indibaniselwano yezi zinto, ke xa uthelekisa loo nombolo, awuthelekisi iiapile namaapile.
Ukufezekisa uqikelelo lweMivuzo
Owona mthombo unokuthenjwa woqikelelo lwemivuzo, utshilo uWesson, ziifemu zokubonisana neengcali, eziqhuba uphando olucokisekileyo lwembuyekezo kwiinkampani nakumashishini. Nangona kunjalo, ezi nkonzo zinokubiza imali eninzi kwaye azinabutyebi bokwenyani kwabo bafuna umsebenzi.
Ukuqonda isidingo esomeleleyo sokungafihlisi kwimivuzo, ukuqala kuye kwavela kule minyaka idlulileyo ukugcwalisa umsantsa phakathi kweenkonzo zokubonisana ezibizayo kunye nezixhobo zasimahla ezikwi-Intanethi.
Ngo-2015, uChris Bolte, owayesakuba ngumphathi wentengiso eWalmart, waseka uPaysa, indawo yokulandela umkhondo kwimizi-mveliso yezobuchwephesha, ngenjongo yokunceda abantu abasisigidi esinye ukuba bazuze umvuzo weedola ezingama-5 000 kumvuzo wonyaka.
Uphuculo olukhulu lwendlela yePaysa yokuqikelela umvuzo ngaphezulu kweGlassdoor's kukufumana idatha ngaphaya kwabathengi nje.
Abathengi banoxanduva lwenxalenye apho idatha yethu ivela khona, kodwa sikwaqokelela ulwazi lomvuzo kubaqeshi, abaqeshi, kunye nolwazi loluntu olunjengeengxelo zeSebe lezabaSebenzi, uBolte uxelele i-Braganca.
Enye into ebalulekileyo yePaysa yinqanaba eliphezulu lokwenza ngokwezifiso.
Ukufikelela kwinkonzo kaPaysa, umsebenzisi kufuneka angenise ulwazi malunga nendawo ahlala kuyo, imfundo, amava omsebenzi, izakhono eziphambili kunye nentlawulo yangoku. (Ukuqhubeka ngokupheleleyo kuya kuba kuhle, kodwa kuyanyanzeleka.) Ngolu lwazi luneenkcukacha, uPaysa uyakwazi ukukhupha inani elithile, endaweni yoluhlu olungacacanga, olubonisa ngokuchanekileyo ixabiso lakho lentengiso.
Le nkonzo ebhalwe igama lomntu, uBolte uyakholelwa, ikhuthaza abasebenzisi ukuba babonelele ngolwazi oluchanekileyo.
Sinceda abantu ukuba baphakamise kwaye banyuse kwaye bathethathethane ngokunikezelwa kwemisebenzi. Kodwa ukuze senze oko, sidinga eyona datha ichanekileyo. Umvuzo womsebenzi wobunjineli wesoftware eApple usukela kwi- $ 120,000 ukuya kwi- $ 170,000. Kodwa oko akuncedi kakhulu. Ukuba usixelela ngakumbi ukuba ungubani, sinokukuxelela ukuba yeyiphi kanye kanye ekufuneka uwele kuyo kolu luhlu, utshilo. Urhwebo apha lungaphezulu ngaphezulu komhlaba.
Ingqondo efanayo iyasebenza kubaqeshi.
Abaqeshi kufuneka bazi ukuba bemi phi kukhuphiswano lweemarike. Ke sibabonelela ngendawo yokujonga ukuba isithembiso abaza kusenza umntu sisibonelelo sentengiso esifanelekileyo, uqhubeke njalo.
Ngoku uPaysa ugcina malunga ne-50 yeedatha zemivuzo yedatha evela kubasebenzisi bayo abayi-1.2 yezigidi ngenyanga kunye neminye imithombo. Ukusukela oko yasekwayo, ikwandisile ngaphaya kwemizi-mveliso yezobuchwephesha ukuya kumajelo eendaba, ezemali kunye namanye amacandelo. UBolte uqikelela ukuba nayiphi na imboni emhlophe yeekhola emhlophe e-US kufuneka ibe nolunye ulwazi olufumanekayo kwisiza.
Iinkampani ezizinzileyo zingena kumdlalo womvuzo, nazo.
Ngo-Novemba ngo-2016, i-LinkedIn yazisa ngenkonzo yayo yembuyekezo, uMvuzo we-LinkedIn. Imodeli ye-LinkedIn isebenza ngokufanayo neGlassdoor, ethi ngokuyintloko ivelise idatha kubasebenzisi. Kodwa eyona ndawo inkulu ehlabathini yokunxibelelana nomsebenzi inento kuphela enokuyinika.
Eyona njongo iphambili yomvuzo we-LinkedIn kukunceda abantu bafumane iipateni ezibalulekileyo kwimakethi yomsebenzi ukuze bacwangcise ngcono inkqubela phambili yomsebenzi. Umzekelo, ukufumana i-MBA kukhokelela kunyuso olukhulu kubalawuli bezentengiso kunaso nasiphi na esinye isikhundla; kunye nezikhundla zentengiso kukhathalelo lwempilo zihlala zihlawula ngcono kunendima efanayo kwamanye amashishini.
Isiseko sayo kukukwazi ukuqonda ukuba kutheni abantu abathile besenza ngaphezulu kwabanye kwaye unokwenza ntoni ukuze uzibekele ithuba lokufumana umvuzo omkhulu. Wonke umntu oqeqeshiweyo kwihlabathi ufuna ukwazi ukuba bangayenza ntoni ukuze bafumane i-10, 000 yeedola, utshilo uDaniel Shapero, owayengumlawuli we-LinkedIn kwimveliso yomsebenzi. Forbes Ngexesha lokwaziswa kwemveliso.
Abantu banokutyala imali ngakumbi kwimisebenzi yabo ukuba bayayazi ukuba iya kuba yintoni imbuyekezo, wongeze watsho.
Intengiso yexesha elizayo
UAsgharUZardkoohi, ingcali yezoqoqosho kwiYunivesithi yaseTexas A&M, uthe inyembezi zemfihlo zokuhlawula ziya kuba nefuthe elikhulu kwintengiso yabasebenzi. Kwaye ezinye zeziphumo sele zibonwa kwicandelo lobugcisa.
Ixesha eliqhelekileyo umntu ahlala ngalo kunye nomqeshi lifutshane kakhulu kunangoku kwii-1950s kunye nee-1960s. Olo tshintsho lunokwenza kakhulu kwimeko yokuqalisa ubuchwephesha. Ireyithi yengeniso kwiinkampani zobuchwephesha iphezulu kakhulu kunamanye amashishini, uZardkoohi uxelele uMbonisi.
Ngokwedatha yePaysa, abasebenzi beenkampani ezinkulu zobuchwephesha zaseSilicon Valley batshintsha imisebenzi qho emva kweminyaka emibini . Oko kukuphindaphindwe kabini kunomyinge welizwe. ( Idatha ye-2016 evela kwi-Bureau of Labor Statistics ibonise ukuba umndilili wokuhlala e-US yayiyiminyaka eyi-4.2.)
UZardkoohi ukholelwa kwelokuba inqanaba eliphezulu lokubuya kwezobuchwephesha ngokuyinxenye kungenxa yesantya sokuqala kweziqalo ezitsha kunye nendlela etshintsha ngayo imfuno yabasebenzi abanezakhono. Kodwa ukuhlawula elubala kunokukhawulezisa nangakumbi.
Njengabantu abatsiba besuka kwenye inkampani besiya kwenye, banolwazi olungcono lokuba iinkampani ezahlukeneyo zikumzi-mveliso omnye zihlawula njani. Oko kuqhubela phambili ukukhuthaza ingeniso, kuba ulwazi oluninzi lwemivuzo abanalo, kulula ngakumbi ukutshintsha abaqeshi nanini na xa besiva ukuhlawulwa kancinci, utshilo.
UJoseph Gordon-Levitt Uhlala ekwenza uzibuze ukuba yintoni ephantsi kwesikhumba sakhe
Tim Kaine kunye neQhinga leNkomfa yoNxweme yeAtlantic
Bhiyozela ama-420 Ngolu luhlu lokuDlalayo
Yintoni i-CBS enayo engqondweni yeXesha lokuGqibela le 'The Big Bang Theory'
uyifumana njani inombolo yefowuni yomntu simahla
Ezona nkqubo zilungileyo zokungena kwi-android
akanazintloni nangoku kumabonakude
I-trey parker kunye ne-matt movie movie
bazohlala phi obamas